Fizahan-tany Armenianina: ny masoivoho amerikana dia nanentana ireo mpizahatany mba hiambina «fomba fanao mahazatra»
Home » Toerana fitsangatsanganana » Fizahan-tany Armenianina: ny masoivoho amerikana dia nanentana ireo mpizahatany mba hiambina hatrany amin'ny “fomba fanao mahazatra”
Fizahan-tany Armenianina: ny masoivoho amerikana dia nanentana ireo mpizahatany mba hiambina hatrany amin'ny “fomba fanao mahazatra”
Ny fanambarana nataon'ny masoivoho amerikana any Armenia, izay nanentana ny olom-pirenena amerikana hiambina rehefa mitsidika an'i Armenia mandritra ny fetin'ny krismasy sy taom-baovao ho avy izao, dia tsy misy resaka politika, hoy ny filohan'ny federasionan'ny fizahantany armenianina.
Mekhak Apresyan nanamarika an'io voalaza io tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny sabotsy teo.
Amin'ny teniny, io fanambarana io dia fomba fanao mahazatra amin'ny fiantsoana ho mailo hatrany eo am-pisondrotana ny fizotran'ny fizahan-tany amin'ny fetin'ny Krismasy sy ny Taom-baovao.
"Fitsipika mahazatra io, indrindra satria nisy fanazavana fanampiny nomena," hoy i Apresyan. “Tsy dia ilaina loatra àry ny milaza fihetsika henjana amin'izany fotoana izany ataon'ny manampahefana Armeniana.”
Nasongadiny fa, amin'ny ankapobeny, ny vahoaka Armeniana, ao anatin'izany ny haino aman-jery sy ny mpampihatra lalàna, dia mila mamorona "endrika" fizahan-tany an'ny firenena.
"Armenia sy ny vahoaka Armeniana dia nambara tamina fandraisam-bahiny", hoy ihany i Mekhak Apresyan. “Ho fanampin'izany, fikambanana iraisam-pirenena maro no manambara ny haavon'ny fiarovana [avo] [any Armenia]. Izahay [Armeniana] dia nampiseho fiarovana ambony sy hatsaram-panahy avo lenta na dia nandritra ny 'revolisiona velvet' aza, izay pasifika tanteraka. Zava-dehibe tokoa ny nandraketan'ireo fampahalalana iraisam-pirenena ireo hetsika ireo. Ankoatr'izay, mpizahatany vahiny marobe koa no nandray anjara tamin'ny diabe, [izay] manamarina izay lazaiko. ”
'Hazo krismasy' lafo indrindra any Eropa vita amin'ny volamena madio
Karnavaly hanomboka sambo fitsangantsanganana voalohany miaraka amina roller coaster